उत्तर कोरियामा लागु औषध, आतंक र हतियारका बारेमा एक कर्नेलको कहानी « Name of Truth News : News Portal in Nepal
उत्तर कोरियामा लागु औषध, आतंक र हतियारका बारेमा एक कर्नेलको कहानी
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २६, मंगलवार ०८:१३
किम कुक सोङ्गलाई पुरानो लत अझै गएको छैन । उनीसँग साक्षात्कारको एक हप्तामा लाग्थ्यो कि उनी अझै पनि अन्योलमा छन्, कि कसैले उनलाई सुन्न सक्छ। उनले क्यामेराको सामु अँध्यारो चश्मा लगाएका थिए र हाम्रो सम्पूर्ण टीममा मात्र दुई जनालाई लाग्थ्यो कि उनीहरुलाई उनको वास्तविक नाम थाहा छ। यहाँ किम कुक सोङ्गको बारेमा कुरा गरिएको छ । जसले उत्तर कोरियाको शक्तिशाली गुप्तचर एजेन्सीमा एक वरिष्ठ अधिकारीको रूपमा ३० वर्षसम्म बर्ष सम्म काम गरे । सोङ्ग भन्छन्, गुप्तचर एजेन्सी सर्वोच्च नेता किम जोङ् ईलको आँखा, कान र दिमागको काम गर्दथ्यो ।
उनी दाबी गर्छन्, उनले रहस्यहरु लुकाए, आलोचकहरुलाई मार्न हत्याराहरु पठाए र धेरै पैसा कमाउन अवैध औषधि प्रयोगशालाहरु स्थापना गरे। अब पूर्व वरिष्ठ कर्नल किम कुक सोङ्गले बीबीसीलाई आफ्नो कथा सुनाउने निर्णय गरे। यो पहिलो पटक हो, उत्तर कोरियाका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले एक प्रमुख प्रसारकलाई साक्षात्कार दिए । किम कुक सोङ्ग भन्छन् कि उनी एक धेरै मायालुु र ईमानदार कम्युनिस्ट सेवक थिए। तर स्थिति र ईमानदारी उत्तर कोरियामा सुरक्षा को ग्यारेन्टी नभएको उनी बताउँछन् । सन् २०१४ मा, उनी आफ्नो जीवन बचाउन देश छोड्न बाध्य भए । त्यो बेलादेखि उनी दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा बस्छन् र अब दक्षिण कोरियाको खुफिया एजेन्सीका लागि काम गर्छन्। उत्तर कोरिया पैसा कमाउन उत्सुक छ र यसको लागी यो मध्यपूर्व र अफ्रिकामा लागुऔषधको सहयोगबाट हतियार बिक्रीसम्म सबै सम्भावित साधनहरुको उपयोग गर्दछ।
किम कुक सांग सोङ्गले उत्तर कोरियाले आफ्नो निर्णयको पछाडि कस्तो रणनीति अपनाउँछ ? कसरी दक्षिण कोरियामाथि हमला गर्यो ? उत्तरका जासूस र साइबर नेटवर्क संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्ने बीबीसीको दाबी छ । त्यो विषयमा लन्डनमा रहेका उत्तर कोरियाको दूतावास र न्यूयोर्क को आफ्नो मिशन सम्पर्क गरे पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको बीबीसीले बतायो ।
एक आतंकवादी टास्क फोर्स
उत्तर कोरियामा एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारीको रूपमा किम कुक गीतको कार्यकालका पछिल्ला केही बर्षहरुमा देशको वर्तमान नेता किम जोंग उनको प्रारम्भिक क्यारियरको बारेमा जानकारी दिए । किम आफ्नो शब्दहरुसंग एक युवकको तस्वीरको बुनाई एक योद्धाको रुपमा साबित गर्न उत्सुक थियो। सन् २००९ मा उत्तर कोरियाले एउटा नयाँ जासूस एजेन्सी बनायो । जसको नाम टोही जनरल ब्यूरो राख्यो । त्यतिबेला किम जोंग उनलाई उनका बुबा जो स्ट्रोकका शिकार भएपछि राजनीतिमा प्रतिस्थापित गर्ने तयारी थियो । त्यसैले पोलिट ब्यूरोका प्रमुख किम जोंग चोलले भूमिका खेले जो उत्तर कोरियाली नेताको सबैभन्दा विश्वसनीय सहयोगी मानिन्छन्।
कर्नल भन्छन्, सन् २००९ मा एक उत्तर कोरियाली पूर्व अधिकारीको हत्या गर्न माथिको आदेश आयो । टेरर टास्क फोर्स गठन ती पूर्वअधिकारी जो देश छोडेर दक्षिण कोरियामा शरण लिएका थिए उनको हत्याका लागि गठन गरिएको थियो । किम भन्छन्, किम जोंग ऊनका लागि यो उनको बुबा सर्वोच्च नेतालाई सन्तुष्ट पार्ने एउटा तरिका थियो। टेरर टास्क फोर्स गुप्त रूपमा ह्वांग जांग योपको हत्या गर्नको लागि बनाईएको थियो।
ह्वांग जांग योप एक समय उत्तर कोरियाका सबैभन्दा शक्तिशाली अधिकारी थिए । उनी उत्तर कोरियाको नीतिका मुख्य वास्तुकार थिए । साल १९९७ मा दक्षिण कोरिया गएपछि उनलाई कहिल्यै माफ गरिएको थिएन। एक पटक सियोलमा, उनले उत्तर कोरियाको शासनको कडा आलोचना गरे र किम परिवारसँग बदला लिन चाहन्थे। तर हत्याको प्रयासमा गल्ती भयो। दुई उत्तर कोरियाली सैन्य मेजर अझै सियोलमा षड्यन्त्रमा १० बर्ष जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उत्तर कोरियाले यो कहिल्यै स्वीकार गरेको थिएन कि त्यसमा उसको संलग्नता थियो ।
किम कुक सोङ्गको बयान एक फरक पक्ष बाहिर ल्याउँछ। उनी भन्छन्, उत्तर कोरियामा आतंकवाद एउटा राजनीतिक उपकरण हो । जसले किम जोंग इल र किम जोंग उनको गरिमाको रक्षा गर्दछ। यो उत्तराधिकारीका लागि आफ्नो महान नेता प्रति वफादारी देखाउने एउटा तरिका थियो । यो श्रृंखला यहीं समाप्त हुँदैन। एक बर्ष पछि सन् २०१० मा दक्षिण कोरियाली नौसेनाको जहाज चेनान टर्पीडोले ठक्कर दिएर डुब्यो। यस घटनामा ४६ जनाले ज्यान गुमाए। उत्तर कोरियाले सधैं घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ।
त्यती मात्र होईन, त्यस बर्षको नोभेम्बरमा, उत्तर कोरियाली दर्जनौं गोला दक्षिण कोरियाली द्वीप योंगप्योंगमा प्रहार गरियो, जसमा दक्षिणका दुई सैनिक र दुई नागरिक मारिए। किम कुक सोङ्गले भने, उनी चेओनान वा योंगप्योंग टापुमा हमलामा प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्, तर उनी भन्छन् कि यो जासुसी एजेन्सीका अधिकारीहरुका लागि कुनै गोप्य कुरा थिएन । यस किसिमको सैन्य अपरेशन किम जोंग उनको विशेष आदेशमा डिजाइन गरि लागू गरिन्छ ।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयमा जासूस
किम कुक सोङ्ग भन्छन् कि, उनको जिम्मेवारी मध्ये एक दक्षिण कोरियासंग व्यवहार गर्ने रणनीतिको विकास गर्नका लागि थियो । हाम्रो उद्देश्य दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा अधिन जमाउनु थियो । यसका लागि हामीलाई तल्लो तहका मान्छेको आवश्यकता थियो । उनी भन्छन्, त्यहाँ थुप्रै केसहरु छन् । जहाँ मैले जासूसहरुलाई दक्षिण कोरिया जान र उनीहरुका माध्यमबाट अपरेटिभ मिशनहरु गर्न निर्देशन दिएँ ।
सन् ९० को दशकमा एउटा केस थियो, जहाँ एक उत्तर कोरियाली एजेन्ट पठाइएको थियो र उनी दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गरिरहेकी थिइन् र पछि उत्तर कोरिया सुरक्षित फर्किइन् । ब्लू हाउस (दक्षिण कोरिया को राष्ट्रपतिको कार्यालय) को लागी पाँच देखि छ बर्षको लागी काम गरेपछि उनी सुरक्षित फर्केर आए र लेबर पार्टीको कार्यालयमा काम गरे। म भन्न सक्छु कि, उत्तर कोरिया बिभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनहरुमा जासूसी गर्दछ। साथै दक्षिण कोरियाको महत्वपूर्ण संस्थाहरुमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।
मैले धेरै उत्तर कोरियाली जासूसहरुलाई दक्षिण कोरियामा सजाय भोगिरहेको भेटेको छु । एनके न्यूजका संस्थापक चाड ओकारोलले भर्खरै लेखमा लेखेका थिए । दक्षिण कोरियाली जेलहरु एक पटक दर्जनौं उत्तर कोरियाली जासूसहरुले भरिएका थिए । जो दशकौंदेखि पक्राउ परेका थिए। यस्ता थुप्रै घटनाहरु भइरहे र कम्तीमा एउटा मामिलामा उत्तर कोरियाबाट सीधै पठाइएको एक जासूसको संलग्नताको खुलासा भयो। तर एनके न्यूजको डाटा अनुसार, २०१७ पछि, दक्षिण कोरियामा जासुसीको मामलामा थोरै मानिसहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यसको कारण भनेको उत्तर कोरिया गुप्तचर संकलनको लागि पुराना तरीकाहरुको सट्टा नयाँ टेक्नोलोजीको सहारा लिईरहेको छ।
किम कुक सोङ्ग भन्छन्, उत्तर कोरियाका पूर्व नेता किम जोंग इलले नयाँ मानिसहरुलाई १९८० को दशकमा साइबर युद्धको तयारी गर्न तालिम दिन आदेश दिए। उनी बताउँछन्, मोरानबोंग विश्वविद्यालयले यसका लागि देश भरबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छनौट गर्दछ र उनीहरुलाई छ बर्ष विशेष शिक्षा दिईन्छ। उत्तर कोरियाको लाजरस समूह २०१७ मा राज्य स्वास्थ्य एजेन्सी एनएचएस र विश्वका अन्य संगठनहरुमा भएका साइबर हमलामा संलग्न रहेको बेलायती गुप्तचर अधिकारीहरु बताउँछन् । सोही समूहले २०१४ मा सोनी पिक्चर्सलाई लक्षित गरि साईबर हमला गरेको विश्वास गरिन्छ। यस समूहको कार्यालय ४१४, सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको किम कुक सोंग बताउँछन् । हामी यसलाई किम जोंग इलको सूचना विभागको रूपमा देख्थ्यौं उनी भन्छन् । उनीहरुको दाबी छ कि उत्तर कोरियाली नेताको यस कार्यालयसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क छ।
डलरको बदला लागु औषध
किम जोंगले भर्खरै उत्तर कोरिया एक पटक फेरि संकटमा रहेको किम जौग उनले घोषणा गरिसकेका छन् । अप्रिलमा, उनले जनतालाई अर्को अकालको लागी तयार रहन अपील गरे। नब्बेको दशकमा, उत्तर कोरिया किम जोंग इलको युगको समयमा एक भयानक अनिकाल लागेको थियो । त्यसबेला, किम कुक सोङ्ग उत्तर कोरियाको अपरेसन विभागमा कार्यरत थिए। उनलाई सर्वोच्च नेताको लागि क्रान्तिकारी कोष उठाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। किम कुक सोङ्ग बताउँछन् कि, यसको मतलब लागूपदार्थ तस्करी हो। उनी भन्छन्, किम जोंग इलको युगमा जब अनिकाल थियो, लागूपदार्थको उत्पादन चरम सीमामा पुग्यो। त्यतिखेर सर्वोच्च नेताको अपरेसन विभाग क्रान्तिकारी कोष समाप्त भएको थियो।
जब मलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो, मैले विदेश बाट तीन जनालाई उत्तर कोरिया बोलाए। वर्कर्स पार्टीको सम्पर्क कार्यालयको प्रशिक्षण केन्द्रमा उत्पादनको काम शुरू गरियो र लागु औषध त्यहाँ तयार गरिएको थियो। त्यो आईसीई (क्रिस्टल मेथ) थियो। हामी यसलाई भन्न सक्छौं। किम जोंग इललाई दिन डलरमा परिणत गर्दथे । किम कुकको गीसोंगका लागूपदार्थको बारेमा बताएका कथा धेरै हदसम्म सत्य देखिन्छ। उत्तर कोरियाको लागु औषध उत्पादनको आफ्नै इतिहास छ। उनी प्रायः हेरोइन र अफिमको कारोबार गर्ने गर्दछ । बेलायतमा रहेका उत्तर कोरियाका पूर्व कूटनीतिज्ञ थाई योंग होले पछि देश छाडे। उनले २०१९ मा ओस्लो फ्रीडम फोरममा उनको देश आधिकारिक रुपमा लागुऔषध बेचबिखनमा संलग्न रहेको बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, ३०, शनिबार १६:५८
काठमाडौं । पछिल्लो समय भिडियोमा खोजिनेमध्येकी एक मोडल हुन्, मलिका महत । फिल्म यात्रा : म्युजिकल भ्ल्ग मार्फत रजतपटमा डेब्यु गरेकी मलिकाले दोस्रो फिल्म ‘पानीफोटो’मा समेत अभिनय गरिसकेकी छिन् । फिल्ममै आफूलाई स्थापित गर्ने तयारीमा रहेकी मलिका केही समययता भिडियोमा व्यस्त छिन् । फूलबुट्टे सारी’ मा अभिनेता पल शाहसँग देखिएपछि दर्शकमाझ उनको लोकप्रियता बढ्दो छ । दर्शकले पल र मलिकालाई ’पिएम’ जोडीसमेत भन्न थालिसकेका छन् । भिडियोमा अभिनय गर्न थालेको केही समयमै उनको आँखामा आउने सपनी, टाढा भए पनि, तिम्रो मनमा ए कान्छा लगायतका गीत दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका छन् ।
भिडियोमा पछिल्लो समय खोजिने मोडलको लिस्टमा मलिकाको नाम अगाडि आए पनि फिल्ममा भने उनले त्यो लोकप्रियता पाउन सकेकी छैनन् । उनले दुई फिल्ममा अभिनय गरे पनि ’पानीफोटो’ भने प्रदर्शन हुन बाँकी छ । तर, उनको भिडियोझैँ लोकप्रियता फिल्ममा भने कम छ । केही दिन अगाडि मात्र फिल्म ’सत्यम’मा अनुबन्धित् भएकी मलिका आफूलाई फिल्ममै सफल देख्न चाहन्छिन् । केहि समयअगाडि मात्र उनी एक प्रतिष्ठित ब्यानरको अडिसनमा रिजेक्ट भएकी थिइन् । उनले पाएको रोललाई अडिसनमा न्याय गर्न नसकेपछि उनलाई लिन नसकिएको उक्त फिल्मको टिमका एक सदस्यले बताए ।
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, ३०, शनिबार १६:५१
एजेन्सी । अस्वभाविक अभिव्यक्तिका कारण बारम्बार चर्चामा आउने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन फेरि सञ्चार माध्यममा चर्चामा आएका छन् । यस पटक उनी अभिव्यक्तिभन्दा पनि आफूले लगाएको फेसनका कारण चर्चामा आएका हुन् । ३७ वर्षीय तानशाह किम आइतबार राजधानी प्योङयाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा अस्वभाविक पहिरनमा देखिएका थिए । किमले चप्पल र मोजामाथि सुट लगाएका थिए । कालो सुट र टाइममा सजिएका किमले चप्पल लगाएपछि धेरैको ध्यान उनीप्रति तानिएको थियो ।
उनको पछिल्लो पहिरनले किमको स्वास्थ्यबारे फेरि अड्कलबाजी सुरू भएको छ । उनको खुट्टाको शल्यक्रिया वा गहिरो घाउका कारण जुत्ता लगाउन नमिलेर चप्पल लगाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अस्वभाविक रूपमा मोटा किम पछिल्लो समयमा केही छरितो देखिएका छन् । उनले १० केजी भन्दाबढी तौल घटाएको कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
उनको स्वास्थ्यबारे विज्ञहरूले बारम्बार चासो दिँदै आएका छन् । अत्यधिक धुमपान गर्ने किम मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित छन् । उनका हजुरबुबा र बाबु दुबैको ह्यदघातका कारण मृत्यु भएको थियो । सत्तारुढ कोरियाली पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा सहभागी भएका किमले आफ्नो पार्टी आर्थिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि दृढ भएको बताएका थिए । कोरियाले सामान गरेको समस्यासँग जुध्न नेतृत्वपंक्ति अनुशासित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।